Ụlọ ọrụ na-eme njem na-eji teknụzụ na-emekọrịta ihe nke ọma na ndị ahịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Ụlọ ọrụ na-eme njem na-eji teknụzụ na-emekọrịta ihe nke ọma na ndị ahịa
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
A na-agbadakarị ọrụ teknụzụ iji kwalite ahụmịhe ndị ahịa n'ịntanetị na n'ịntanetị ma na-enyere aka belata ọnụ ahịa, akụkọ anyị na-egosikwa na ndị ọkwọ ụgbọ ala a ga-akarị ebe niile ka njem na-agbake.
Ụlọ ọrụ na-eme njem ga-enyocha ka esi eji teknụzụ na-emekọrịta ihe nke ọma na ndị ahịa n'ịntanetị, na-ekpughe nyocha nke WTM London na Travel Forward wepụtara taa (Monday 1 November).
A jụrụ ihe dị ka ndị isi ụlọ ọrụ 700 sitere na ụlọ ọrụ njem ka atụmatụ teknụzụ ha siri gbanwee n'ihi Covid. Isii n'ime iri (60%) nke nlele ahụ kwuru na ha na-eleba anya n'ụzọ ha ga-esi na-ejere ọtụtụ ndị ahịa ozi n'ịntanetị kama ịbụ ndị mmadụ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara (48%) ga-akwalite mmasị ha n'iji teknụzụ na-eme ka ahụmịhe zuru oke maka ndị njem, gụnyere mmekọrịta na-anọghị n'ịntanetị yana mkparịta ụka dijitalụ.
Pasent dị ntakịrị ntakịrị (41%) ga-enyochakwa ụzọ maka teknụzụ iji belata ọnụ ahịa.
Ejikọtara ebumnuche ndị a. Ịbawanye nhọrọ maka ndị njem na-eje ozi onwe ha, ma ọ bụ na-eje ozi n'ịntanetị na-enweghị ịkpọtụrụ ebe oku, bụ ahụmahụ ka mma ndị ahịa. Mana teknụzụ a na-ebelatakwa okporo ụzọ gaa na ebe kọntaktị, nke pụtara na ndị ọrụ nwere ike itinye uche na njikwa ajụjụ nke enweghị ike ịmegharị ya. Ọ bụghị naanị na ọnụ ahịa na-ebelata kamakwa ọ kachasị mma.
Automation bụ mpaghara ebe ndị ụgbọ elu, ọkachasị, kwesịrị itinye ego, ka McKinsey siri kwuo. O kwuru na ndị na-ebu ya kwesịrị ileba anya na akpaaka na-eche ndị ahịa ihu, dị ka kiosks na-enye onwe ya n'ọdụ ụgbọ elu yana akpaaka azụ ụlọ ọrụ dị ka ndekọ ego ego na akwụkwọ ọnụahịa.
N'ebe ọzọ, Akụkọ ụlọ ọrụ WTM gosikwara na Covid agbanweela atụmatụ teknụzụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ njem ọ bụla. Ihe na-erughị otu n'ime ụlọ iri (9%) kwuru na atụmatụ teknụzụ ha n'ọdịnihu ga-adị ka ọ dị tupu ntiwapụ ahụ, ebe 3% na-ekwu n'ezie na ha esila na ọrịa a pụta wee kpebie itinye obere uche na teknụzụ. .
Simon Press, Onye isi ihe ngosi ngosi, WTM London na Travel Forward, kwuru, sị: “A na-agbadakarị ọrụ teknụzụ iji meziwanye ahụmịhe ndị ahịa n'ịntanetị na n'ịntanetị ma na-enyere aka belata ọnụ ahịa, akụkọ anyị na-egosikwa na ndị ọkwọ ụgbọ ala a ga-adịwanye ukwuu ka njem na-agbake. .
"Ma eleghị anya, ihe kacha ewepụ bụ na ihe dị ka 90% nke ihe atụ anyị kwuru na atụmatụ teknụzụ ha maka 2022 agbanweela n'ihi ntiwapụ ahụ, nke bụ ozi magburu onwe ya maka onye ọ bụla na-aga, na-egosipụta ma ọ bụ ọbụna na-eleta WTM London na njem n'ihu n'afọ a, ebe. Ndị na-emepụta ihe ọhụrụ ụlọ ọrụ nọ n'aka iji kesaa nghọta na nka ha."